Asomdwoe Nka Nnipa a Wɔsɔ N’ani—Ade a ɛma ebinom di Buronya
“Asomdwoe Nka Nnipa a Wɔsɔ N’ani”
“Anuonyam nka Onyankopɔn wɔ sorosoro, na asomdwoe nka nnipa a wɔsɔ n’ani asase so.”—LUKA 2:14.
Afe biara, pope no ne nyamesom mpanyimfo foforo de wɔn ano ka asomdwoe ho asɛm, na wɔn anidaso ne sɛ Buronya bere du a nsɛm a abɔfo no kae yi bɛba mu sɛ: “Asomdwoe nka nnipa a wɔsɔ n’ani asase so.” Enti ebinom hyɛ da tu kwan kodi Buronya.
Sɛ asomdwoe ba Buronya bere mpo a, ɛnkyɛ. Ɛho nhwɛso ne asɛm bi a esii December 1914. Saa bere no, na Wiase Ko I no gyina mu denneennen wɔ Europe, nanso Britain ne Germany asraafo a wɔhyehyɛ amoa mu no pue bedii Buronya boom. Wɔkyekyɛɛ wɔn ho aduan, nsa, ne sigaret. Wɔbɔɔ bɔɔl mpo. Nanso saa asomdwoe no ankyɛ. Britain sraani bi kyerɛw krataa kɔmaa obi saa bere no, na ɔkae wom sɛ Germany sraani bi ka kyerɛɛ no sɛ: “Ɛnnɛ de, yɛte asomdwoe mu. Nanso ɔkyena, wobɛko ama wo man na me nso mako ama me man.”
Wɔawo akokoaa ama yɛn, . . . Na wɔbɛfrɛ ne din sɛ . . . Asomdwoe Hene. N’ahenni mu bɛtrɛw na asomdwoe a enni awiei bɛba.” (Yesaia 9:6, 7) Wunnye nni sɛ Yesu Kristo ho nkɔmhyɛ yi ma yenya awerɛhyem paa? Wɔanwo Yesu amma asase so sɛ ɔmma asomdwoe mmra da koro pɛ wɔ afe biara mu. Ɔbɛtena ɔsoro adi hene, na wama asomdwoe a enni awiei aba.
‘Monam me [Yesu] so benya asomdwoe. Mo ho rehiahia mo wiase de, nanso momma mo bo ntɔ mo yam! Madi wiase so nkonim.’ (Yohane 16:33) Ɛnnɛ mpo Yesu ma n’akyidifo nya asomdwoe. Ɛyɛ nokware sɛ Kristofo ho hiahia wɔn. Nanso Bible a wɔasua nti wonim nea enti a amanehunu wɔ wiase na wonim sɛnea Yesu de asomdwoe bɛba daa. Ɛno ma wɔn asom dwo wɔn.
Yehowa Adansefo tie Yesu asɛm, enti ɛmfa ho ɔman anaa abusua a wofi mu ne kasa a wɔka, ɛmfa ho sɛ wɔyɛ tuntum anaa kɔkɔɔ no, wɔwɔ saa asomdwoe no bi. Wokɔ wɔn nhyiam no bi wɔ Ahenni Asa so a, wubehu sɛ ɛte saa. Ebia wo nso wubegye atom sɛnea afoforo agye atom no sɛ asomdwoe a ɛte saa no som bo kyɛn asomdwoe biara a Buronya de ba.
Yehowa Adansefo de, ɛmfa ho sɛ wɔyɛ tuntum anaa kɔkɔɔ anaa kasa a wɔka no, wɔwɔ asomdwoe ne biakoyɛ. Wokɔ wɔn nhyiam no bi wɔ Ahenni Asa so a, wubehu sɛ ɛte saa
Buronya Mu Ahosɛpɛw No—“Asomdwoe Nka Nnipa a Wɔsɔ N’ani”